HTC U12 ga-etinye ọnụ na 4k ihuenyo | Gam akporosis
HTC U12 ga-agbakwunye ihuenyo 4k
Firmlọ ọrụ Taiwanese, nke bụ onyinyo nke ihe ọ dị afọ 10 gara aga, anaghị ebuli isi ya kwa afọ, n'agbanyeghị eziokwu ahụ na ọ naghị ebupụta ọdụ "ọjọọ" n'ahịa. Isi nsogbu nke ụlọ ọrụ a na-enye anyị mgbe niile ka achọtara na ọnụahịa, ebe ọ bụ na ọnụ ya see ahia na onu ahia di elu, na-enweghị ụdị ọnụ ọnụ na ọtụtụ ọnwa, ha anaghị akwụ ụgwọ.
Companylọ ọrụ ahụ na-aga n'ihu na-enweghị atụba na akwa nhicha ahụ, yana na-enweghị ịgbanwe usoro iwu ọnụahịa kwa afọ n'agbanyeghị ahịa dị ala, ma na-arụ ọrụ ugbu a na onye nọchiri HTC U11, HTC U12, ọnụ nke anyị nwere olile anya. emehiela otu ihe ahụ gara aga nke butere ọnọdụ nke ịre Google akụkụ nke mkpanaka mkpanaka na ọnwa ole na ole gara aga.
Mgbe ọnwa ole na ole fọdụrụ maka HTC flagship na-esote ịda n'ahịa ahụ, akụkọ banyere nkọwa U12 amaliteworị ịmịpụ, ọnụ nke ihe niile yiri ka ọ na-egosi ga-ejikọta Ihe ngosi 4k na usoro 18: 9, nwere mkpebi nke pikselụ 4.320 x 2.160, ha niile na ihuenyo 6-inch.
Ọ bụ Snapdragon 12 ga-ejikwa HTC U845, nke Samsung ga-amalite na nkeji iri na ise nke afọ ọzọ yana Samsung Galaxy S9 na S9 +, tinyere ya na 4 na 6 GB nke RAM na nchekwa nke 64 na 128 GB. Ijikọta ihuenyo na mkpebi dị otú ahụ na ama bụ nzọụkwụ dị oke egwu, ebe ọ bụ na oriri batrị ga-arị elu. Amaghị m ihe ndị injinia HTC na-eche banyere mgbe ha na-emebe ọdụ ha, mana O yiri ka ụlọ ọrụ ahụ ọ chọrọ ịgbaso usoro ndị na-aga ala n'abis.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » HTC U12 ga-agbakwunye ihuenyo 4k
Ebee ka a na-ekwu? Ha dị isii
Zaghachi Maharba Htol
Ehichapụrụ ọtụtụ ihe n'ihi nzaghachi na-adịghị ike nke e nyere ọtụtụ nkọwa. Otu onye nwere ike ịkwado nkwupụta na $ amsung (nke na-akwụ onye na-ede akwụkwọ ụgwọ iji kwuo okwu nke ọma banyere onwe ha na njọ nke asọmpi ahụ) na Apple dị. Agbanyeghị, mgbe azịza m malitere ịchọ nkọwa sitere na ndị niile nyochachara HTC U11 na ahụghị m ihe karịrị Otuto maka ekwentị (belụsọ na imewe nke dabara na ọ bụ nnukwu nsogbu nke okpokolo agba) na ndị mmadụ na-ekwu na ọ bụ ezigbo-njedebe (n'ezie ndị ọkachamara niile nwara ya wee kwuo na a ga-ewere ya dị ka amaghị ihe)
Ọ ga-ehichapụkwa ihe ndị a, n’ikpeazụ ihe a gwara ya ekwuolarịrị.
Nke ziri ezi, ọ bụ ihe ihere na ọ dị mpako ikwere na ọ bụ chi nke teknụzụ na okwu ya dị nsọ, mana hey, amalitere m ịchị ọchị mgbe m gụrụ na naanị $ amsung na Apple na-eme elu. Daalụ
Samsungfọdụ Samsung Galaxy Note 8 friji mgbe batrị na-agwụ
Samsung Mobile Care, mkpuchi mkpuchi gọọmentị maka Samsung Samsung